यस्तो राशि भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती ! – Waikhari
गृहपृष्ठ विविध यस्तो राशि भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती !
सबै पुरुषकाे चाहना हुन्छ आफ्नाे श्रीमती राम्रा हुन् भनेर । त्यस्ता चाहनाहरु समय–समयमा प्रकट पनि हुन्छन् । प्राय हरेक पुरुषको एउटा समान चाहना हुन्छ, सुन्दर श्रीमती पाउनु । तर यो त जरुरी छैन कि सबैको यो चाहना पूरा होस् । यसमा केही हदसम्म हाम्रो भाग्यले पनि प्रभाव पार्छ । अर्थात राशिअनुसार पनि पुरुषले सुन्दर महिला पाउने विषय शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
आज एमालेको वडा अधिवेशन : अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन..
१० बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलबाट रावलको राजीनामा, ५ बुँदे फरक मत पेश